Ardublock: Arduino အတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မလဲ အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
Arduino ပျဉ်ပြားဝယ်ယူခြင်းသည်ခေတ်နောက်ကျနေသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောစစ်ဆင်ရေးကိုလုပ်ဆောင်သောပရိုဂရမ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကုဒ်တစ်ခုလိုအပ်သည်မှာရှင်းနေပါသည်။ ဤသည်, ကံမကောင်း, လူတိုင်းအတွက်မရရှိနိုင်ပါနှင့်ဖြစ်ပါတယ် Arduino ကိုမော်တာတစ်လုံးရွှေ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အလင်းကိုဖွင့်ဖို့ programming အတွက်လိုအပ်တယ်.
ဤအရာအားလုံးသည်အမြင်အာရုံတည်းဖြတ်သူများနှင့်အမြင်ပရိုဂရမ်းမင်းများကိုအလွန်လူကြိုက်များစေခဲ့သည်။ ဒီအမျိုးအစား ပရိုဂရမ်ရေးသားခြင်းသည်သင့်အား mouse ကိုဆွဲယူထားသောလုပ်ကွက်များမှတဆင့်အစီအစဉ်များကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်curly braces ကိုပိတ်ရန် (သို့) function name ရှည်များကိုရေးရန်မေ့နေသည်။ Arduino ကို visual programming ကိုမိတ်ဆက်ပေးသောလူကြိုက်များသော tool တစ်ခုမှာ Ardublock ဖြစ်သည်။
1 Ardublock ကဘာလဲ?
2 ကျွန်ုပ်တို့၏ operating system တွင် Ardublock ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
2.2 Ardublock installation ကို
3 Ardublock မှရွေးချယ်စရာ
Ardublock သည် Arduino IDE ၏ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုဒ်ရေးရန်မလိုပဲပရိုဂရမ်များနှင့်ကုဒ်များကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။အမြင်အာရုံဆိုင်ရာကိရိယာများမှတဆင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်၎င်း၏အားသာချက်များရှိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပရိုဂရမ်ကိုမည်သို့လေ့လာရမည်ကိုသိပါကလူသိများသောစာရေးခြင်းကိုမေ့သွားမည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် debugging လုပ်ငန်းစဉ်၌အချိန်များစွာသက်သာလိမ့်မည်။ မဟုတ်ပါကကုဒ်သတ္တုအထိမ်းအချုပ်ပိတ်လိုက်ပါဘူး။ အမြင်အာရုံကိရိယာများနှင့်အတူပရိုဂရမ် programming ဖြစ်ပါတယ် အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောနှင့်ကျွမ်းကျင်သူပရိုဂရမ်မာနှစ် ဦး စလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည် ပရိုဂရမ်မည်သို့ရေးရမည်ကိုမသိသောသုံးစွဲသူများအတွက်လည်းမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာရန်လိုသည်။
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ Ardublock ဟာသူ့ဟာသူ program တစ်ခုထက်ပိုပြီးဖြည့်စွက်ထားသည်။ Arduino IDE ကို၎င်း၏လည်ပတ်မှုအတွက်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်အကျဉ်းချုပ်တစ်ခုအနေဖြင့် Ardublock သည် code programming ကို visual programming နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန် Arduino IDE ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။
Ardublock တွင်အတွေ့အကြုံရင့်ပရိုဂရမ်မာများအတွက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင် ပို၍ ကောင်းသောအရာများရှိသည်။ ၎င်း၏အပြုသဘောဆောင်သည့်အရာတစ်ခုမှာဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုဖြစ်သည် စီမံကိန်းများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာဖန်တီးရန်လုပ်ကွက်များနှင့်အလုပ်လုပ်ပါ.
Ardublock သည်လုပ်ကွက်များနှင့်အမြင်အာရုံဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးအစိတ်အပိုင်းများနှင့်လည်းအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုမှာဂီတနှင့်အခြားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလုပ်ကွက်များအားအသုံးပြုလိုသည့်အခါတိုင်း၎င်းကိုအမည်ပေးမည်သို့မဟုတ်ပြတင်းပေါက်တစ်ဖက်မှပြတင်းပေါက်၏အခြားဘက်သို့ဆွဲတင်လိုက်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့မှာ Ardublock ၏လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေများသည် Arduino IDE ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Ardublock သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Arduino ဘုတ်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ Ardublock မှဖန်တီးထားသောကုဒ်များကိုလွယ်ကူစွာနှင့်အလွယ်တကူစမ်းသပ်နိုင်သည်။ အစီအစဉ်ကိုပြီးသွားရင်ပေါ့ သိမ်းဆည်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များသည် Ardublock ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ကွက်များနှင့်ဖန်တီးခဲ့သောကုဒ်နံပါတ်တစ်ခုဖြစ်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ operating system တွင် Ardublock ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
ကောင်းပြီ၊ Ardublock ဆိုတာဘာလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားပြီးသားဖြစ်တယ်၊ ငါတို့ကွန်ပျူတာမှာဘယ်လိုတပ်ဆင်ထားသလဲ။ အဲဒါကိုဘယ်လိုသုံးနိုင်လဲ။
Ardublock နှင့်ပတ်သက်သောတစ်ခုတည်းသောစာရွက်စာတမ်းများမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဖြစ်သော်လည်းအမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်တို့ Arduino IDE ရှိပါက installation လုပ်ငန်းစဉ်သည်အတော်လေးလွယ်ကူပြီးမြန်ဆန်ပါသည် ငါတို့ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ Arduino IDE ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ရှိသည်အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်၎င်းကိုထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိပါကသင်ရပ်ပြီးကြည့်နိုင်သည် ဒီမှာ ၎င်းကို Gnu / Linux တွင်မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်မည့်နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည် Java virtual machine သို့မဟုတ်အလားတူရှိသည် အဖွဲ့ထဲမှာ။ အကယ်၍ Gnu / Linux ကိုကျွန်ုပ်တို့သုံးလျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် OpenJDKအထူးသဖြင့် Oracle နှင့် Google အကြားထိပ်တိုက်တွေ့ပြီးနောက်။ အခုငါတို့အကုန်လုပ်ပြီးပြီ၊ ငါတို့သွားရတော့မယ် တရားဝင် Ardublock က်ဘ်ဆိုက် နှင့် Ardublock အထုပ်, java format နဲ့ဒါမှမဟုတ် extension ကို .jar နှင့်အတူသောအထုပ်ကိုရယူပါ။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောဖိုင်သည် installation wizard ပါ ၀ င်သော executable file မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာအားလုံးကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရမည်။
Ardublock installation ကို
ပဌမ Arduino IDE ကိုဖွင့်ပြီး Preferences or Preferences ကိုသွားတယ်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် "Sketchbook location:" option ကိုသွားပြီး window အသစ်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဤလိပ်စာသည်ကျွန်ုပ်တို့ Arduino IDE ၏အချို့ပလပ်ဂင်များသို့မဟုတ်ဒြပ်စင်များကိုသိမ်းဆည်းရန်ဖြစ်သည်။ ပေါ်လာမည့်တည်နေရာသို့မဟုတ်လိပ်စာသည်“ Documents / Arduino” သို့မဟုတ် home / Documents / Arduino ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိပ်စာကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါက download လုပ်ထားသော Ardublock ဖိုင်ကိုထိုလိပ်စာသစ်သို့ရွှေ့ပြောင်းရန်လိပ်စာအသစ်ကိုသိထားရမည်။ Arduino folder ကိုဖွင့်လိုက်ရင်အခြား subfolders နဲ့ files တွေတွေ့ရလိမ့်မယ်။
အောက်ပါလိပ်စာ "tools / ArduBlockTool / tool / ardublock-all.jar" ကိုစွန့်ပြီး Ardublock package ကိုရွှေ့ရမယ်။ Arduino IDE ပရိုဂရမ်ကိုဖွင့်ထားရင်အဲဒါကိုပိတ်ဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ။ Tools (သို့) Tools menu ထဲက Ardublock option ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ၎င်းကိုနှိပ်လိုက်လျှင် Ardublock interface နှင့်ကိုက်ညီသော window အသစ်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ သင်မြင်ရသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည် installation လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါက၎င်းသည်ရိုးရှင်းပြီးမြန်ဆန်သော်လည်းရှုပ်ထွေးပါသည်။
Ardublock သည် Arduino အတွက်ထူးခြားဆန်းသစ်သောအရာဟုထင်ရသော်လည်းအမှန်တရားမှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အမြင်အာရုံဆိုင်ရာပရိုဂရမ်းမင်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်တစ်ခုတည်းသောအစီအစဉ်မဟုတ်ပါ။ အမြင်ဆိုင်ရာပရိုဂရမ်းမင်းကိုအာရုံစိုက်သောကိရိယာများစွာရှိပြီး၊ Ardublock တွင်ရှိသည့်အခြားရွေးချယ်စရာများအားလုံးသည်ထူးခြားသောပရိုဂရမ်များဖြစ်ပြီး Arduino IDE သို့တိုးချဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်ထပ်တိုးခြင်းများမဟုတ်ပါ။
ဤရွေးချယ်စရာများအနက်မှပထမဆုံးကို Minibloq ဟုခေါ်သည်။ Minibloq သည်အမြင်အာရုံဆိုင်ရာပရိုဂရမ်များကိုအဓိကထားသောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်၎င်း၏ဖန်သားပြင်ကိုအပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲခြားထားသည် - ဖန်တီးရန်လုပ်ကွက်များပါသည့်အပိုင်းတစ်ခု၊ အစီအစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုလိုသောလုပ်ကွက်များကိုရွှေ့ပြောင်းမည့်နောက်အပိုင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးမည့်ကုဒ်ကိုဖော်ပြမည့်တတိယအပိုင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောသုံးစွဲသူများ။ Minibloq ကိုဒီမှတဆင့်ရယူနိုင်ပါတယ် link ကို.
ဒုတိယ tool ကိုဟုခေါ်သည် Arduino အတွက်ခြစ်ရာ။ ဒီ tool ကြိုးစားပါတယ် Scratch Children ၏အစီအစဉ်ကိုမည်သည့်အဆင့်နှင့်မဆိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါ နှင့်အတူတူပင်ဒphilosophနနှင့်အတူအစီအစဉ်များကိုဖန်တီးပါ။ Arduino အတွက် Scratch သည်အစီအစဉ်အပြည့်အစုံဖြစ်သည်။
တတိယမြောက်ကိရိယာများကိုကောင်းစွာမတည်ဆောက်နိုင်သေးသော်လည်း၎င်းသည်အမြင်အာရုံဆိုင်ရာပရိုဂရမ်များအတွင်းရှိအလားအလာရှိသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီကိရိယာကိုခေါ်တယ် မိုးကုတ်, ကိရိယာတခု အရာ Kickstarter ကအပေါ်မွေးဖွားပေမယ့်တဖြည်းဖြည်းအကောင်းဆုံးလမ်းအတွက်ရင့်ကျက်နေသည်။ အခြားအစီအစဉ်များမှခြားနားချက်ဖြစ်နိုင်သည် အဆင့်မြင့်သုံးစွဲသူများထက်အတွေ့အကြုံမရှိသူများအတွက်ပိုမိုအထူးပြုသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Ardublock အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ Arduino IDE ကိုရိုးရာအသုံးပြုမှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမြင်အာရုံနှင့်မကျွမ်းကျင်သောပရိုဂရမ်မာအများစုအတွက်သာရရှိနိုင်သည်။
အာရပ် ဒါဟာအနည်းဆုံးအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောသုံးစွဲသူများအတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အကယ်၍ သင်ဟာကျွမ်းကျင်သူပရိုဂရမ်မာတစ်ယောက်ဆိုရင်ဒီကိရိယာအမျိုးအစားများဟာအမှန်ပဲ ကုဒ်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာဖန်တီးနိုင်ခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်မဟုတ်ပါ။ ဒါပမေဲ့အံ့သွစရာအလုံအလောက် mouse ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကီးဘုတ်ကိုအသုံးပြုခြင်းထက်နှေးကွေးသည်။
သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည်အတွေ့အကြုံမရှိသောပရိုဂရမ်မာများသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့သင်ယူနေပါက Ardublock သည်အထူးအကြံပြုလိုသောတိုးချဲ့ပညာတစ်ခုဖြစ်သည် မရှိမဖြစ်ပြောစရာမလိုပါ၊ ဤအဆင့်များ၌ Ardublock နှင့်ရှာရန်နှင့်ကျော်လွှားရန်ခက်ခဲသော syntax အမှားများနှင့်ပြsmallနာငယ်များကိုပြုလုပ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ သို့သော် သင်ဘာရွေးသလဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » Arduino » Ardublock: Arduino အတွက်ဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲ
မင်္ဂလာပါတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ Ardublock သည် Arduino ၏မူကွဲအသစ်များနှင့်အလုပ်လုပ်ပါသလား။
Oscar Mansila ကိုစာပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ဒီဂရပ်ဖစ်ဗားရှင်းတွေနဲ့ရေးသားခြင်းအစီအစဉ်ကိုအတူတူတီထွင်နိုင်သလား။ တနည်းအားဖြင့်ရေးသားထားသောကုဒ်များကိုလုပ်ကွက်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။
နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခု .h, subroutines စသည်တို့ကိုသင်ဘယ်လိုသတ်မှတ်သလဲ။ ဒီကိစ္စမှာ?